Ọtụtụ narị ndị ọrụ na-ebibi iPhone 7 ha n'ihi vidiyo adịgboroja | Akụkọ akụrụngwa
Ọzọkwa TechRax mebiri ya na netwọkụ ndị a, oge a na --emepụta vidiyo nkuzi banyere etu esi nwetaghachi Jack 3,5mm na iPhone 7. Otu n’ime ihe ọgbaghara kachasị na ngwa ọhụrụ mkpanaka na apụl bụ kpomọ njikọ njikọ analogị. nke anyị ga-eji jikọọ ekweisi ọdịnala anyị. Ugbu a, anyị nwere ike ijikọ ekweisi naanị site na nkwụnye ọkụ Lightning ha yana site na EarPods nke ha gụnyere. NkechiAgbanyeghị, vidio vidio a na-egosi anyị otu anyị ga-esi jiri ntakịrị ntakịrị mwube dị mfe anyị nwetaghachi njikọta Jack 3,5mm Kemgbe ụwa.
Anyị ga-echeta na AirPods, ekweisi ikuku nke Apple, na-eri ihe na-erughị € 179, yabụ TechRaz kpebiri bulite vidiyo a nke ọ natara njikọta 3,5mm Jack na ntakịrị. N'ụzọ dị otú a, onye òtù ọlụlụ ahụ na-eji nkwadebe, malite mkpọpu ahụ wee malite site na oghere ahụ. Ihe di ma ọ bụ nwunye ya na-eme bụ oghere miri emi nke 14mm, n'ebumnuche nke ime oghere zuru oke iji tinye EarPods ndị a ma ama. N'ezie, nke ahụ bụ otu onye ya na ya si eme ya, iji gosi ha ma bulite vidiyo ahụ "na-eme ka ha na-arụ ọrụ" site na ịtinye ha n'ime oghere dị mfe.
Nsogbu a biara na ndị ọrụ enweghị ike ijide na ọ bụ vidiyo na-atọ ọchị, ma bido ịhapụ ozi na-echetara ndị ọrụ ndị ọzọ ka ha ghara ịrụ otu ọrụ ahụ dị ka onye ọrụ TechRax, kwuru dịka «Anwala ya, iPhone m kwụsịrị ịrụ ọrụ obere oge ka emechara oghere ahụ enweghị m ike ịnụ egwu«. Na nkenke, anyị amaghị ma ọ bụrụ na ihe ndị a kwuru bụ karịa trolls karịa vidiyo ahụ n'onwe ya, ma ọ bụ na ha enwebeghị ezigbo njikere ịme oghere dị ka nke ahụ zuru ezu. N'ikpeazụ, nke a bụ ihe mere na iPhone 7 na enyi anyị na-egwu egwu site na ọwa YouTube TechRax.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Ọtụtụ narị ndị ọrụ na-ebibi iPhone 7 ha maka vidiyo adịgboroja
Gha ụgha ụgha bụ naanị vidiyo ahụ mere mmadụ ji mee ya ihe mere ọ dị ya ka ọ dị n'ihi na ifixit agbasasịworị otu ma gosipụta na ọ naghị eweta ya ka ịgha ụgha. Ọ bụ otu onye maara ihe na-ewetaghị ya.
Ebee ka ndị narị otu narị mmadụ ahụ nọ? Enwere naanị otu vidiyo na ịntanetị nke ọtụtụ narị mmadụ, ekwetaghị m ya. Echere m na ibipụta akwụkwọ maka mbipụta bụ ụgha.
Euro 179 bụ ego maka gị? Somefọdụ ekweisi na-ege ntị ikpeazụ na-agụ karịa euro 5 ma ọ bụ ụfọdụ piano nke ọdịyo ikpeazụ na-agụ euro 2000 ma dabara na nkwụ aka. 180 abụghị ihe ọ bụla. Enwere m iPhone mana enweghị m ngwa ị na-akwụ, nke ahụ bụ ihe m chọrọ ma enweghị m ike
Juan, enwere ezinụlọ ndị ji ego ahụ ebi kwa ọnwa, obere ntakịrị ahụ
Ndewo Rafas, ihe ị na-ekwu bụ eziokwu, mana ndị ahụ agaghị azụta ụdị nke ụdị na ọnụahịa ahụ na ịchekwa ya mere na ha agaghị achọ ndị ọkà okwu ahụ.
Zaghachi Juan L.
Blackberry kwụsịrị smartphone n'ichepụta